Sibona kwakhona i-Aigo A8, ikhamera ye-14 megapixel kunye nefowuni ye-Android njengesipho | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Nangona kunjalo Aigo (UAltek Leo) uveza i-A8 yakhe njengekhamera yedijithali enefowuni eyakhelweyoInyani yile, ukugweba ngemifanekiso, kusondele ekubeni yifowuni yekhamera yedijithali. Ngapha koko, uyilo lwayo luyafana ncam nolo lwe-iPhone 4. Nangona kunjalo, inika I-megapixels ze-14 isisombululo siyenza ibonakale.
La Ikhamera yeAigo A8 Inenzwa ye-CCD, i-Xenon flash kunye ne-3x yokusondeza. Ukongeza, iyakwazi ukurekhoda inkcazo ephezulu (HD) iividiyo kwi-720p.
Malunga ne iimpawu ezifana nefowuni, Engeyiyo kakhulu ukuba le terminal ukunikelwa ukususela yesiqalo sayo esiqatha kwi camera, oko iyachiza nenkqubo yokusebenza Android 2.1 I-Eclair ine-3,2-intshi ye-WVGA yesikrini esine-capacitive, ifakwe kwiprosesa ye-600MHz kwaye inonxibelelwano lweBluetooth, iWi-Fi, iGPS, kunye nenethiwekhi ye-GSM kunye ne-3G.
Njengoko ubona, eyona nto intle malunga neAigo A8 kukuba, ngaphandle kwamathandabuzo, yiyo Ikhamera yedijithali ye-14 megapixel. Njengomphelelisi, sinokuthi, kubandakanya iselfowuni ye-Android ethobekileyo. Apha ngezantsi sipapashe ividiyo ukuze ufunde okungakumbi malunga nekhamera yefowuni ye-Aigo, i-A8.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Sibona kwakhona i-Aigo A8, ikhamera ye-14 megapixel kunye nefowuni ye-Android njengesipho
Iindaba ezimnandi… ngesiTshayina, kunjalo. Ndiyibonile le modeli kwi-intanethi kwaye iseyiprototype: kwimenyu ephambili, ngaphandle kokuba ine-interface ye-Android 2.1, ayinayo i-Gmail, iimephu zikaGoogle okanye eyona imbi kunazo zonke: ayinayo iMarike ye-Android. Kodwa njengoko isengumzekelo kunye nokunye, kwintengiso yaseTshayina, kulungile kuya kufuneka silinde kancinci, kuba bathe bazokuthengisa eYurophu, kwaye ukuba ufuna ukukhuphisana kwezi "ndawo" Kuya kufuneka ube nesoftware kwiimeko ezenza imarike kwintengiso, kuba kungenjalo ubeka umngcipheko wokuba ungazukuyifumana itato.
Eminye, ukusondeza kunye nevidiyo kubonakala kuyinto eyamkelekileyo kum. Isohlwayo kukuvela nge-Android 2.1…. Ukuba une-800 Mhz ye-CPU, dubula nge-2.2 ubuncinci… ..
Ndingathanda ukuba apha kwi-Androidsis, xa usazi ukuba esi sikhundla seAltek Leo siyathengiswa eYurophu, uya kupapasha…. Ndifuna ngokwenene ukuyithenga.
Into ehleli ilihlazo yindlela abantu abasakhohliswa ngayo ngee-megapixels… zii-megapixels ezili-14? zeziphi izinto onazo? uqhubana njani nemifanekiso esele ithethiwe? Ikhazimle kangakanani ilensi? ... le khamera ine-truño pita cheats ezininzi eziziziyatha ... kwaye ndiyaxolisa ngentetho kuba ndisebenza kwivenkile yokufota kwaye ndiyayazi into endithetha ngayo.
Kwelinye icala kwaye njengendawo ekubhekiswa kuyo, iikhamera ezihlangeneyo zeengcali zinee-CCD ze-megapixel ezili-10, njengoko kuyintlekele ukubeka isisombululo ngakumbi. Jonga iCanon G12 okanye i-S95 esele ikwiimarike iinyanga ezimbini.
Ukuba uyayiqonda le khamera ingaphezulu kwefowuni, akukho ngqiqweni ukucinga ukuba inekhamera efana neselfowuni xa ubona loo ndoda ine-zoom ebonakalayo ngasemva kwaye ukuba ine-senator ye-CDD, ayizukubakho eyona khamera ibalaseleyo, iya kuba yeyona khamera ibalaseleyo inomsebenzi weselula.
Nabani na ofuna ukuthenga ikhamera yedijithali enobungcali uyazi ukuba makenze ntoni kwaye ayithenge phi. Kodwa ukuba ufuna ukuba nekhamera yedijithali elungileyo (elungileyo) ene-zoom ebonakalayo, iprosesa yomfanekiso ophindwe kabini weSunny9, kunye ne-sensor ye-CCD eqhotyoshelwe kuyo kwi-smartphone ye-Android, kulungile andizukucinga ngayo.
Kucacile ukuba iCanon EOS izakuthatha iifoto ezingcono kunalesi sixhobo KONKE, kodwa kum, ukuphatha ikhamera eyidijithali elungileyo eqhotyoshelwe kwi-smartphone yam ye-Android akunakuthelekiswa nanto.
Owu, kwaye into ye-megapixel ayinandaba nokuba unamalini, ndithatha iifoto nenye ye-5 kwaye baphuma begqibelele. Ngokwazi kwam, esi sigxina sithatha iifoto ezintle kakhulu ngenxa yohlobo lwelensi enyukayo, iAltek luphawu lwaseTaiwan oluncinci olwaziwayo eYurophu kwaye kakhulu eAsia, kwaye lukhethekileyo kwimveliso yeekhamera zedijithali: http://www.altek.com.tw
Asiyi kuyibona le fowuni apha. Akunyanzelekanga ukuba ubelumke kakhulu ukwazi ukuba abantu baseNtshona abayi kuvunyelwa ukuba babe nekhamera elungileyo kunye nefowuni kwizixhobo esinye. Bafuna ukuba sichithe kabini. Sele singabemi bohlulo lwesibini, kulungile ukuhlawula.
Lawula unxibelelwano lwakho kwinethiwekhi yeWi-Fi ngendlela elula nekhululekileyo